Rabshadihii ka dhacay Iiraan waxay laayaan waaxyada Saadka! | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya98 IranWarshad Kaos Logistics oo ku taala dalka Iran!
04 / 01 / 2018 98 Iran, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Dhacdooyinka maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayay dalka Iiraan ayaa sii kordhinaya rabshadaha. In kasta oo xogta ku saabsan mudaaharaadyada ay ka dhacayaan warbaahinta Turkiga, tirada kuwa naftooda ku waayey ay sii kordhayaan. Waa suurta gal in masuuliyiinta Iiraan ay qaadaan talaabooyin adag oo ka dhan ah dhacdooyinka, faragalin ballaaran oo lagu xakameynayo kacdoonka iyo xitaa in albaabada Iran gebi ahaanba la xiro.
Xusaya xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya Turkey iyo Iran Gaadiidka International iyo Guddoomiyaha Service Logistics Association Bixiyeyaasha Emre Eldener labada warshadaha logistics ganacsiga shisheeye waxyeelayn karaan xaaladda this xun, ayuu yiri.
dhacdooyinka ee Iran ku saabsan tahay markii toddobaadkii ee, iyo sidoo kale dunida oo dhan waxaa sabab u ahaa diinta ee gobolka oo dhan indhaha Turkey ee. Iyada oo faafitaanka jahwareerka gudaha Iran uu kor usii qaadanayo walaaca wadamada dariska ah, hadana waxaa macquul ah in Iiraan ay xirto dhamaan albaabadeeda dunida. East-West dhidibka of ganacsiga caalamiga ah, taasoo muujinaysa in mid ka mid ah jilayaasha ugu waaweyn ee socodka saamayn ku yeelan kara xiisadda dhaqaalaha Turkey ka dhacaya Iran International Gaadiidka iyo Guddoomiyaha Service Logistics Association Bixiyeyaasha Emre Eldener, "Warka waxa aan soo socda oo leh dareen. Marka hore, xiisadda bulshada ee mid ka mid ah waddamada aan dariska nahay waa murugo iyo walwal dhammaanteen. Waxaan rajeyneynaa in dhacdooyinka loo xallin doono sida ugu dhaqsaha badan ”.
Emre Eldener wuxuu tilmaamay in xiisada ka dhalatay Ciraaq iyo Siiriya sanadihii lasoo dhaafay ay sababeen dhaqaalaheena dalkeena “Iiraan waa mid kamid ah jilayaasha dhaqaalaha ugu awooda badan bariga dhexe iyo waliba deriskeena. Baabi'inta cunaqabateynta lagu soo rogay Iran 2016 waxaa loo arkayay horumar horumarineed oo loo sameeyay waaxda saadka. Sababtoo ah Iiraan waxay ku xiran tahay Yurub iyada oo looga mahadcelinayo khadadka gaadiidka ee maraya waddankeenna. Sidoo kale, socodka load in Iran ka Europe ayaa sidoo kale kiciyo baabuurta xamuulka gaadiidka ku maraya dalka Turkiga, "ayuu yiri. Emre Eldener ayaa carabka ku adkeeyay in Iran ay meel muhiim ah ku leedahay ganacsigayaga shisheeye wuxuuna yiri, “muggayada ganacsiga, oo hoos ugu dhacay 15 bilyan doolar muddadii cuna qabateynta la xayiray, ayaa la filayaa inuu gaaro 30 bilyan oo doollar markii la qaado xayiraadda. Isla mar ahaantaana, iyada oo la raacayo qaab dhismeedka xiriirka laba geesoodka ah ee ganacsi, shirkado badan oo Turki ah ayaa maalgashiyo waaweyn ku sameeyay gobolka sannadihii la soo dhaafay. Warehouse iyo maalgashiga maraakiibta ayaa la sameeyay.
Intaa waxaa sii dheer, maraakiibta wali kusii nagaanaya koonfurta sababa la xiriira dhacdooyinka ka socda Siiriya ayaa dib u helay dhaqdhaqaaqii iyaga oo uga mahadcelinaya kordhinta ganacsiga aan la leenahay Iran. Si kastaba ha noqotee, halista dib-u-celinta amniga ee gobolka waxay dhaawici doontaa gaar ahaan howlaha gaadiidka ee wadada. Sababtaas awgeed, waxaan ka walaacsanahay faafitaanka dhacdooyinka dalka oo dhan, marka ugu horreysa waa beni humanitarianaadminimo ka dibna dhaqaale ahaan. ”
3. Buundada si ay u nasto qaybta sahayda
Qaadista Lacagta Bixinta Lacagta Muddada Sayniska Sare
Buundada saddexaad waxay kor u qaadi doontaa waaxda saadka
Mar labaad fowdo Marmaray ah
Chaos waxay sii waddaa qiimaha gawaarida Gaziantep ee Faransiiska
Qalalaasaha xarumaha IZBAN
Garoonka saddexaad wuxuu ka cararayaa qaybta kirada baabuurta
Wadada Tareenka ee Eurasia 2016 Caruurta Oo Wada Jir Ah
Gaadiidka gaadiidka ee kuyaala guryaha istiraatiijiyada ee İzmir